Maamulka Jubbaland iyo Puntland ayaa beeniyay inay mas’uul ka ahaayeen fashilka ku… – Hagaag.com
Maamulka Jubbaland iyo Puntland ayaa beeniyay inay mas’uul ka ahaayeen fashilka ku…
Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa beeniyay in shirkii Afisyooni uga socday Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada dalka ay mas’uul ka ahaayeen fashilka ku yimid.
War-saxafadeed ay soo saareen Jubbaland iyo Puntland oo uu saxaafadda u akhriyay Wasiiru Dowladaha Madaxtooyada Jubbaland ayaa looga jawaabay eedda loo jeediyay labada maamul ee ah in ay sabab u yihiin fashilka ku yimid Shirkii Afisyooni.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Jubbaland iyo Puntland aysan ogayn shir fashilmay, waxaana ay sheegeen Madaxweyne farmaajo uu maanta shirka soo xiray si wadatashiyo ay u soo sameeyaaan madaxda ka qayb galaysay shirka, hasayeeshee waxaa Dowladda dhexe ay shaacisay in shirkii fashilmay, intii lagu maqnaa Nasiinada waa sida ay hadalka u dhigeene.
”Ummadda Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka waxaan u caddeyneynaa inuusan jirin wax shir ah oo fashilmay oo aan ognahay Nasasho ayaan ku kala maqannahay ee Shirku waa noo sidiisii”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Puntland.
Ugu dambeyn Jubbaland iyo Puntland ayaa baaq u diray beesha Caalamka, waxaana ay sheegeen in aysan jirin wax fashil ah oo ku yimid shirkii ka socday Teendhada Afisyooni. War-saxaafadeedka Jubbaland iyo Puntland ayaa imaanaya iyadoo Shirkii u dhexeeyay Madaxda dowladda Federaalka, kuwa dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ee Maanta dib uga furmay Teendhada Afisyooni uu markii saddexaad kusoo dhamaaday natijo la’aan sida ay sheegtay Dowladda Soomaaliya.